ပင်လယ်စာမာလာပာင်း ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ငါးငံပြာရည်...........................................၅ ဇွန်း( ထမင်းစား )
ပာင်းခတ်မှုန်. ........................................၁ ဇွန်း(.......။.......)
မာလာပာင်းချက်ဖို.စတင်ပြီဆိုတာနဲ. ..မာလာခေါက်ဆွဲချောင်း၊ မာလာကော်
ချောင်း ၊ ကြက်နားရွက်မှို၊ ပဲပြားလိပ်ခြောက် စတာတွေကို သီးသန်.စီရေ၀
လေးထောင်းပါ။ ချင်း+ ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်းထောင်းပါ။
ကောက်ရိုးမှို (သို.) ငွေနှင်းမှိုတွေကိုလည်းသန်.စင်လှီးဖြတ်ထားပါ။
ရေတစ်ဝက်ခန်.ထည့်ပါ. ငါးငံပြာရည်၊ ပာင်းခတ်မှုန်.၊ ရှလကာရည်တို.ဖြင့်
နောက်ဆုံး..အရသာမြည်းစမ်းပြီးမှ..မှို၊ ကန်စွန်းရွက်၊ ရှမ်းနံနံတို.ပေါင်းထည့်